Meya veHarare, VaJacob Mafume, vari kurara mutirongo kwezuva rechitatu mushure mekunge majisitereti Bianca Makwande vazivisa kuti vachapa mutongo mangwana wavo pachikumbiro chaVaMufume chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo.
VaMafume, vari kupomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisina mwero vachinzi vakaudza vashandi vekanzuru yeHarare kuti vape hama dzavo masitendi mumusha weWestlea asi ivo vange vasingakodzeri kupihwa masitendi aya.
Nyaya yaVaMafume yakamhan’arwa kuSpecial Anti-Corruption Unit naHousing Director veHarare City Council, VaEdmore Nhekairo, izvo zvakazoita kuti VaMafume vasungwe nemusi weCchitatu.
VaMafume vari kuramba nyaya iyi uye mutongi atadza kupa mutongo pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba panyaya iyi achiti nguva yange yapera.
Gweta raVaMafume, VaTonderai Bhatasara, vaudza Studio 7 kuti vachadzoka kudare mangwana kuzonzwa mutongo wedare.
Harare Mayor Jacob Mafume and Lawyer Tonderai Bhatasara
Muchuchusi panyaya iyi, VaPanganyai Chiutsi, pamwe nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi, vari kupikisa kuti VaMafume vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti vanogona kutiza munyika kuti vasatongwe pamwe nekuti vanogona kupindira kana kukanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi.
Asi VaBatasara vaudza dare kuti VaMafume vanokodzera kupihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nekuti igweta zvakare munhu ane, mhuri, imba nezvimwe zvekuti haangadi kukanganisa rusununguko rwake netuziza kutongwa panyaya diki diki yaari kupomerwa.
VaBhatasara vatiwo vamwe vafakazi vanonzi vanogona kuvhiringidzwa naVaMafume vakaita semumahan’ari VaNhekairo pamwe nemumwe mushandi mukuru mukanzuru yeHarare, VaEdgar Dzehonye, havasiri kuenda kubasa pari zvino sezvo vakamiswa basa vachipomerwa mhosva dzehuwori panyaya dzemasitendi muHarare.
Mune imwewo nyaya yanga iri kumatare, dare repamusoro reHigh Court rarasa chikumbiro chaamai VaMitchell “Moana” Amuli, Amai Yolanda Kuvaoga, chekuti vapihwe mukana wekuviga mwana wavo, Moana, uyo akashaya munjodzi yemugwagwa namuzvinabhizimisi aive nemukurumbira, VaGenius "Ginimbi" Kadungure musi wa08 Mbudzi.
Amai VaMoana vakakwidza nyaya iyi kudare mushure mekunge mahofisi amabharani mukuru kana kuti Registar General, apa magwaro ekuviga mufi kana kuti Burial Order kuna baba VaMoana, VaIshamael Amuli, avo vaida kuti mwana wavo aradzikwe kumarinda eWarren Hills vachishandisa chitendero chavo chechiMuslim.
Asi Amai VaMoana vaida kuti dare rigure gwaro iri kuti vapihwe rimwe gwaro rekuti vanoviga mwana wavo kuZororo pachishandiswa nzira dzechitendero cheKrisitu.
Vakati mwana wavo aive munhu aive nemukurumbira neshamwari dzakwanda uye kuvigwa nenzira yechiMuslim yaive nzira yekuda kuti shamwari dzake dzisave paanoradzikwa.
Asi mutongi wedare Justice Pisirayi Kwenda vati mahofisi aRegistrar-General akapa burial order zviri pamutemo uye VaAmuli vanokodzera kuviga mwana wavo zvavanoda vachiti mwana uyu akagara nababa vake kwenguva yakareba pasi pechitendero chechiMuslim.
Dare ratiwo kunyange hazvo Moana ange ave kunwa hwahwa nekuita zvimwe zvisingabvumidzwe pasi pechitendero chechiMuslim, chitendero ichi hachisarure uye chinoregerera uye hapana humbowo hunoratidza kuti Moana akange ave kuita zvechitendero chechiKiristu.
Dare rati Amai VaMoana havana kupa zvikonzero zvinogutsa dare kuti vapihwe simba rekuchengetedza mwana wavo nekudaro rarasa chikumbiro chavo uye rasvorawo nyaya yekurwirana kuti mufi oradzikwa kupi richiti zvinhu zvinodziksira chimiro chemufi,
Zvichakadai VaAmuli vaudza Studio 7 kuti Moana acharadzikwa mangwana kuWarren Hills.
Moana akashaya munjodzi yemumugwagwa kuBorrowdale aine shamwari dzake nhatu dzinoti muzvinabhizimisi Kadungure pamwe nedzimwe mbiri, imwe inobva kuMozambique neimwe inobva kuMalawi.